I-Semalt - Izindlela Zokususa Iphrofayli Yakho Ye-Backlink Ngedatha Ye-Crawl
I-Google ivuselele abasebenzisi bayo ngokubaluleka kwe-backlink izinyanga, kodwa siyazi ukuthi ama-backlink ayisihluthulelo sempumelelo ye-injini yokusesha ephumelelayo. Basiza i-Google, i-Bing, ne-Yahoo inqume ukubaluleka kwamawebhusayithi namabhulogi. Abantu abaningi baphikisana noma ukusebenzisa ama-backlink asebenzayo okubandakanya izivakashi noma cha, futhi kuyiqiniso ukuthi ama-backlink angakuqinisekisa ukuthi uhamba phambili web traffic - relè a impulsi elettromeccanico. Ngaphezulu, bakusiza ukuqapha nokwenza ngcono izixhumanisi ezikhona zesayithi lakho.
Ake sihlole amaphuzu ambalwa ukuze siqonde ukuthi kungani kubalulekile ukuhlanganisa idatha ye-backlink nedatha ye-crawl. Lokhu kuzosisiza siqonde ukuthi singayithuthukisa kanjani izinga le-injini yokusesha yamawebhusayithi ethu nokuthi hlobo luni lwezenzo okufanele zithathwe ukuze kwandiswe inani labo kwi-intanethi.
Lapha u-Igor Gamanenko, uchwepheshe ophezulu ovela ku Semalt , uxoxa ngezindlela zokwehlisa iphrofayli yakho ye-backlink nge-data crawl.
1. Amakhasi aphukile anama-Backlink
Ngamakhasi aphukile nemibiko ye-backlink, ungathola kalula amakhasi anephutha nge-backlink yawo futhi abuyele kumaphutha angu-4xx ne-5xx. Uma ufuna ukugwema le nkinga, kufanele uphule ama-backlink akho ngezigaba ezihlukene. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi ukubuyisela amakhasi kwisimo esingu-200 noma ubuyekeze isimo sawo ku-301. Enye indlela ukuthi ungayithumela eminye amakhasi ewusizo namakhasi anemininingwane.
2. Amakhasi angenayo indexed nge-Backlinks
Wonke amakhasi angenayo indeksti ene-backlink kufanele alungiswe ngendlela efanele. Akuvumela ukuthi ubone ukuthi yiziphi amakhasi ezibuyisela abasebenzisi kumaphutha angu-200. Uma le nkinga ikhona, amakhasi akho ngeke abe i-indexed, futhi awukwazi ukuthuthukisa isimo se-search engine ye-website yakho. Uma ufuna wonke amakhasi akho atholakale yizinjini zokusesha, kufanele ulungise inkinga engekho indexed ngokushesha ngangokunokwenzeka.
3. Ama-URL aqondisa kabusha nge-Backlinks
Amawebhusayithi ashintsha izakhiwo zawo kanye nokuqukethwe ngesikhathi, futhi kungenzeka ukuthi ushintshe i-URL yakho kanye nezakhiwo zayo njengokwenqubo yamanje. Uma kubonisa iphutha le-301, akufanele uvumele izinjini zokusesha zikhomba iwebhusayithi yakho kuze kube yilapho iphutha lisuswa. Kuyiqiniso ukuthi i-backlink nekhasi eliqondisa kabusha akuyona inkinga ebalulekile, kodwa ungabuyekeza futhi ushintshe izilungiselelo zayo ukukhomba izithameli ezifanele. Qinisekisa ukuthi uye wasebenzisa umbhalo we-anchor ukwandisa amathuba akho okuphuthukiswa emiphumeleni yenjini yokusesha.
4. Amakhasi ezintandane ane-Backlinks
Amakhasi ezintandane angadlulisela inqwaba yomgwaqo wakho wesayithi, kepha abakwa-webmasters bavame ukuwakhohlwa, ukunikeza izivakashi zabo abanokuhlangenwe nakho okungekho emthethweni. Kufanele ubuyekeze amakhasi ezintandane nge-backlink ngamunye ngamunye, uqinisekise ukuthi wonke amakhasi anikezela inani kulabo abalaleli bakho.
5. Ungavumeli i-URL ene-Backlink
Wonke ama-URL angavunyelwe aneminye imikhakha yangemuva iqokomisa amakhasi afakwe kwifayela le robots.txt. Amakhasi analo magazini angabangela izinkinga zezivakashi, anciphise inombolo yabo kakhulu. Kufanele uvumele amakhasi ukuba akhishwe ngokususa kwifayela lakho le-robots.txt.
6. Ikhasi le-Notif elilandelayo le-Backlink
Embikweni we-Meta Nof elandela i-Backlink, ungabona amakhasi namathegi we-meta futhi ukhombise amaphutha kuwo. Ungaxazulula inkinga ngokususa amathegi angadingekile kusuka kuwebhusayithi yakho. Cabanga ukufaka ipulazi efanele ukuthuthukisa ukusebenza jikelele nokubukeka kwesayithi lakho.